Pages: 12» | Go Down
Author Topic: ခေတ်ပေါ် မြန်မာ အီဒီယမ် စကားလုံးများ (Read 8786 times)
« on: June 13, 2011, 04:29:11 PM »
ကြွက် = ဟိုလူတွေလေ။
ကျွဲ = သင်္ဘောသား လောကမှ ကပ္ပလီ မလေးများကို ခေါ်သော နာမည်။
ကြောင်တောင်နှိုက် = ပိုင်ရှင်ရှိသော ပစ်စည်းကို ယူခြင်း။ ယူသောသူ။ (တောက် ဟိုကောင် ငါ့ရည်းစားကို ကြောင်တောင်နှိုက် သွားလေ ခြင်း (မျက်ရည်စက်ကလေးများနှင့်) )
ကြားကားဆွဲ= သူတစ်ပါးရည်းစားကို ဖြတ်ခုတ်သည်။
ဂွမ်းတယ်……… မိတယ်၊ မိုက်တယ်
ကျိုးတော့မယ် = ဒီညနောက်ကျနေပြီ ကျိုးတော့မယ်
ကျားဖမ်းမယ်= ဘီယာသောက်မယ် (Tiger Beer)
ကြိုဆိုပါတယ် = thank you အပြောခံရတဲ့အခါ you are welcome ဟု မြန်မာလိုတုံ့ပြန်ခြင်း
ကုန်းဆင်းတစ်ခွက်တိုက်မယ် … အချွန်နှင့်မမည်
ခိုက်သည်= ကြိုက်သည် ( ဥပမာ- မောင်နတ် ဟို စာအရမ်းရေးတဲ့ ကောင်မလေးကို ခိုက်နေတယ် )
ချီးကြီးသည် = -ကျယ်သည်။ ဘဝင်မြင့်သည်။
ခိုကြီး = အလွန်ငြီးသူ (ခိုကြီးလာနေပြီဟေ့၊ ဝေးဝေးပြေးကြ။ လူတွေ့ရင်ငြီးတော့မယ်)
ခေါင်း= ပြည့်တန်ဆာမှုလုပ်စားသူ ခေါင်းဆောင်။
ဂျိုနဲ့သားရေ ပဲရှိတယ် = ငမွဲ ငတေ
ဂျော်ဒဂီး = အခြောက်
ဂျပတိုင်း= ရူးတူးတူး။ ပေါတောတောကောင်(ဂျပတိုင်းပဲကွာ)
ဂေါက်သီး= ကြောင်နေ ဂေါက်နေသောသူ။
ဂျီပုန်း = အခြောက်။ ( ပုန်းနေသော ဂျီကလေး ဟု အဓိပါယ်ရ၏။ ထပ်ကာ အနက် မဖွင့်ပါရစေနှင့်တော့)
ဂေါ်လီ = ခေတ်မီသော ခေတ်ဆန်သော ဆိုရှယ်ကျသောသူ။ မှတ်ချက်စကား။ (ဟို ကောင်မလေးကတော့ ဂေါ်လီပဲ)
ဂွတ်ရှယ်ပဲ… ကောင်းမှကောင်း… ။
ငဝိုင်း = ငဝက် = ပိုက်ဆံ ( လက်ညှိုးနှင့်လက်မကို ကွင်းပြသည် )
ငပွေး = နေရာတကာ ပါသောလူငယ်။
ငပနော် = မနူးမနံ့ (ငယ်သေးတယ် ကလေးငယ် ဆိုတဲ့သဘော)
ငတ = သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းခေါ်သည်။(ဟေ့ကောင် ငတ မင်းပျောက်ချက်သားကောင်းလှချည်လား)
စမူ = မိန်းကလေး
စမာန် = အားအားယားယား အချိန်ပြည့် မိန်းမ ကိစ္စပဲ တွေးသူ။
စော်= ကောင်မလေး ( လူငယ်အချင်းချင်း သုံးသောစကား )
စောက်ဆန်းကြီး = မြင်ဖူးသမျှတွေထဲမှာ အထူးအဆန်းဆုံး
ဆားပုလင်း= အိမ်ဖော်။ အိမ်စေ။
ဆားပုလင်းနှင်းမောင်= ကိုယ့်အိမ်က အိမ်ဖော်ကို ပြန်ကြံသူကြီး။ ( မင်းသိင်္ခတော့ ရင်ကျိူးတော့မှာဘဲ .. တတ်နိုင်ဘူး ပြောနေကြတာကို )
ဆတ်ဆလူး = နန့် သည် နှင့် အတူတူပင်။
ဆင်ဖမ်းနေတယ်= ပိုက်ဆံရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေတယ်
ဇယား = အရှုတ်ထုပ်။ ကောင်မလေး။ (သုံးစွဲသူကို လိုက်ကာ၊ အချိန်ကိုလိုက်ကာ ကွာ၏)
ဉာဏ်တိမ်တယ် = အတွေးအခေါ် ညံ့ခြင်း စဉ်းစားဉာဏ် မရှိခြင်း။
ထမင်းစားပြီး ချီးမပါ= ဝသောသူများကို ခေါ်၏။
ဒူတယ်ကွာ ( အတော်ထုံအခြင်းကို ကိုယ်စားပြု၏ )
ဓါတ်ကြိုး = အန္တာရာယ်ပေးနိုင်တဲ့သူ။ (အဲဒီမိန်းခလေးကတော့ ဓါတ်ကြိုးပဲ)
ဓါတ်တိုင်သေးပန်း = ကြုံရာ လုပ်တတ်တဲ့ကောင်။ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ကောင်။
ဓါတ်ကျသည်= စိတ်ဓါတ်ကျသည်။ အာရုံရောက်လွန်းသည်။
ဓာတ်ပဲ = ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ ဓာတ်ပဲ
နွားပလာတာကျွေး= အသိဉာဏ် မရှိသောသူကို ပြောနေ သင်နေရခြင်း။
နားကားသည် = ပြသနာတက်သည်။
နောက်မီးလင်း = တိတ်တိတ်ပုန်း မိန်းမ၊ ယောက်ျား ရှိနေခြင်း။
နား မုဒိန်းကျင့်တယ် = နားပူနားဆူ ပြသာနာ ရှာခြင်း
နှစ်ဖက်ချွန် = အမျိုးသားများရော အမျိုးသမီးများနှင့်ပါ sex အတွက်တွဲသူ
ပေခေါက်တယ်= ကပ်စီးနဲသည်။ စီးပွားရှာသည်။ ကတ်သည်။ ( ဥပမာ- ဟိုကုမ္ပဏီက အက်ဒမင်ကြီးပေါ့ သိပ်ပေခေါက်တယ်)
ပလီစိ ချောက်ချက် = (ပုတီးစေ့ ချောက်ချက်မှ လာသည်ဟု မောင်နတ် ထင်မိ၏။ ပုတီးစိပ်သောအခါ တခါတရံ မတူညီသော သစ်သား အတိုင်းအဆကြောင့် တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးထိသံမှာ ချောက်ဟုမြည်လိုက် ချက်ဟုမြည်လိုက် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး ပြောခြင်း)
ပစ္စည်း= မကောင်းသော မိန်းခလေး။ ဆေးခြောက် ဘိန်းဘင်း။ (ဟင်းဟင်း ဒီပစ္စည်းလေးက ဘယ်လောက်လဲဗျ ဟင်( ဦးကျောက်လုံး မျက်နှာပေး အသံလေးနှင့်))
ပွကြီး = နေရာတကာ ဝင်ပါတဲ့ကောင်။ (ဘုရင်ကြီးမေး- နတ်ဆိုး မင်းက ဖိုရမ်မှာ ပွကြီးလားကွ ဟေ) (နတ်ဆိုးဖြေ- မဟုတ်ရကြောင်းပါဘုရာ့၊ ဘုရာ့တပည့်တော် ဗျူးတီးအန်ဟဲ့တို့ ဘစ်ဇစ်နက် တို့မှာ မပါပါ့ဘုရာ့။ ဒါကြောင့် ဒီဘွဲ့ ထူးကို တပည့်တော် လက်မခံပါရစေနဲ့ဘုရာ့။ ပိုပြီး နှံစပ် တတ်ကျွမ်း စုံလင် သူများကို သာ ချီးမြှင့်တော်မူပါ့)
ပတ်ကြမ်းတိုက် = ပြသနာကြီးကြီးရှာသည်။ (မိန်းမများတွင် အသုံးများ၏)
ပလစ်လိုက်တယ် (ခေါက်ထားလိုက်) = တူတူသွားရမဲ့ နေရာကိုမခေါ်ပဲသူကိုထားခဲ့လိုက်တာ
ဖို့ရတယ်= ပေးရတယ်။ ကမ်းရတယ်။
ဖီးလ်ကွေးတယ် = မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာသောအခါ စိတ်ပျက်ခြင်း အားလျော့ခြင်း စိတ်ခံစားချက်မကောင်းခြင်း၊ အချိန်တို့တွင် ပြောတက်သော ဗန်းစကား ။
ဗုံးခွဲ = အတင်းတုတ်သည်။ ဖွသည်။ (ဟင်းဟင်း သိမယ်… အဲဒီအကြောင်းတွေတော့ ဗုံးပြန်ခွဲ ပစ်လိုက်ဦးမယ် ဟင်းဟင်း)
ဗုံးကျဲသည် = အီအီးပါသည်၊ အိမ်သာတက်သည် (ငါဗုံးကျဲလိုက်ဦးမယ်)
ဗုံးကျဲသည် = ဆူတယ် (ဒီဆရာမ လာပြီး ဗုံးကြဲနေတယ် … လာဆူနေတယ်)
ဘဲဥ=ပရုတ်လုံး=အဖြူကောင်= ယာဉ်ထိန်းရဲ (နေရာဒေသလိုက်ပြီး အခေါ်အဝေါ် ကွဲပြားကြသည်)
ဘာမီတွန် = ပျင်းဖို့ကောင်းအောင် စာသင်သော ဆရာ/ဆရာမ
ဘောစိ = သူဌေး၊ ပိုက်ဆံရှိသူ
ဘဏ်ပေါ့တယ် = မရှိတဲ့ သိက်ခါ ကျသည်၊ အလေးအနက်မရှိ။ (မင်းနဲ့ စကား ပြောရတာ ဘဏ်ပေါ့တယ်။)
ဘီးဂျဲ = (အသက်ကြီးသော/ ဆရာဖြစ်သော) လူကြီး၊ အသက်အရွယ် အတွေးအခေါ် ဒိတ်အောက်နေသော ယောင်္ကျားများ
မျက်စိအစာကျွေး= မိန်းခလေးများကို အငမ်းမရ ကြည့်ခြင်း။ (ဟဲဟဲ ဒဂုံ စင်တာသွားပြီး မျက်စိအစာ သွားကျွေးလိုက်ဦးမယ်)
မင်္ဂလာယူနေတယ်..။ – အသားယူနေတယ်… လို့ထင်တာပဲ.။
မြောင်းထဲရောက်သွားမယ်။ =- ဘ၀ပျက်သွားမယ် ..ထင်တာပဲ..။
မြွေပဲ ထမင်းစားပြီး ချီးသွားလွှတ်တဲ့အခါကြရင် ခပ်ဝေးဝေးသွား
မီး မြင့် သည် = -ကျယ်သည်။ ဘဝင်မြင့်သည်။
မွှေပေါ့ဟယ် = အခြေက်များမှ လက်မြှောက်သော စကား
မှည့် တယ်………… လှတယ်၊ ထွားတယ်
ယပက်လက်= ယိုးဒယားများကို မြန်မာတို့ ခေါ်သောနာမည်။
ရှဲလ်= သွား ( ရန်ဖြစ်တာ ရှဲလ်လေးချောင်း ကျွတ်သွားတယ် )
ရစ်သည်= ပွစိပွစိပြောခြင်း။ ကိစ္စတစ်ခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောရင်း သူတစ်ပါး စိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေခြင်း။
ရေခမ်းနေလို့ ..ဒေါင် ဆိုင်တောင် မ ညွန့် နိုင်ဘူး…. စိတ် ပိန်ရတဲ့ကြားထဲ
ရုပ်မပေါ်ဘူး=စုတ်ပြတ်သပ်နေသည်(အခု ပိုက်ဆံအနှုတ်တွေကိုပြောတာ။ ပိုက်ဆံရုပ်မပေါ်ဘူးတဲ့)
ရူးခါ = ရူးသွားလောက်အောင်ကို လှတာ
ရုပ်ပေါက်တယ် = အရှက်မရှိ ဂရုမစိုက်ပဲလုပ်ချင်ရာလုပ်သူ
ရုပ်ပေါက်တယ်= ငွေရှိလို့ ဘာမဆိုဖြစ်တယ်(သူဌေးရုပ်ပေါက်တယ်လို့ပြောချင်တာလားမသိဘူး)
ရှင်လို့ရတယ် (သေလို့ရတယ်နှင့် သံကွဲကြောင်းတူ)
လန်းသည်= စိတ်အားတက်ကြွသည်။ (မျိုးကျော့မြိုင်+ ဒိုးလုံး ရဲ့ ငါတို့လန်းတဲ့နေ့ သီချင်း )
လှည်းကြိုးထမ်း = တစ်ပါးသူအမှုကို ကိုယ်အပြစ်ခံသည်။ သူတစ်ပါးနှင့်ရသော ကိုယ်ဝန်ကို ကိုယ်နှင့်ယူပြီးမှ မွေးဖွားခြင်း
လန်ထွက်နေတာပဲ = မြင်မကောင်းအောင် ၀တ်ထားသော
လေတိုက်တယ် = ဒီအကောင်ငါကို လေလာတိုက်နေတယ် (လာကြွားနေတယ်)
လေတယ် = စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်း။
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ = ချာတူးလန်တို့ ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ
လော်ဒဂီး = ယောင်္ကျားလေး
လျှာတောင်တယ် = အလွန်လှပသော မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို မြင်ရင် ပြောတဲ့ စကား
လက်လန်တယ် = ချာတူးတို့ကတော့ လက်လန်တယ်။ (ထိန်းလို့မရ)
လန်းလန်းကြီးနဲ့ ဂွမ်းဂွမ်းကြီး = အကောင်းစားများ အရောင်တောက်တောက်များ ပြူးပြဲနေအောင် ဝတ်ဆင်ထားသောသူ
ဝ ထားလိ်ုက်ပါ= အေးအေးဆေးဆေးထားလိုက်ပါ။
ေ(သာ)က်ရမ်း (စ) = အလွန်အကျူးတင်စားခြင်း။ (ဥပမာ- သောက်ရမ်းကောင်းတယ်)
သဝေထိုး= လျှောက်သွားသည်။ ဖမ်းလို့မရ။ (ငါ့ရည်းစားလေး ဘယ်တွေ သဝေထိုးနေပါလိမ့်)
သူကြီးလဲ ပါးပါးလေးပဲ ပုတ်နိင်တယ်.. ရွာသားတွေ ငို ပြ မနေနဲ့.. ပွိုင့် တိုးမပေးဘူး …. အထူအပါးနားလည်…
အမှုပဲ = ပြသနာပဲ။ (ဟာ မင်းကတော့ အမှုပဲကွာ )
အပင်လိမ် = အရာနှစ်မျိုးရောလုပ်သူ။ (အရက် နှစ်မျိုးရောသောက်ခြင်း)
အိုင်စီ = ဦးနှောက် သိပ်မကောင်းတဲ့သူ (မင်းကတော့ အိုင်စီပဲ) (အိုင်စီဆိုသည်မှာ စက်ပစ္စည်းများတွင် ဦးနှောက်လို့ သဘောထား၏)
အကောင်= လူယောက်ျားလေးများ၊ ပန်းပင်ကဲ့သို့ အပွင့်အခက်ဝေဆာသူ။
အိတ်ဇယ်လ် (excel) = ဇယား = အရှုတ်အထွေးများတဲ့ကောင်၊ မိန်းခလေး။
အကိတ်ကြီး= ကိုယ်ကာယ ထွားကျိုင်းသူများကို ထိုသို့ခေါ်၏။
အကိတ်ကြီး = ကောင်းမလေတွေကိုတွေရင်……..(ယောက်ျားလေးတွေပဲပြောတာ) အကိတ်ကြီးတော် (သို့) ချိုချိုအောင် တို့ရင်ရင်လှတို့တင်တင်ကြီးတို့ ကို လမ်းမှာတွေ့ ရင် တာဝန်သိ ရွာသား တစ်ယောက် အနေနဲ့အလာပ သ လာပ နှုတ်ဆက်တာ။
အဆင်လေး=ကောင်းလေး ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေတွေ့တဲ့ အခါ အခြောက်တွေပြောတဲ့စကား အဆင်လေးဆိုတာ …. ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ မြင်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်စုက (ပုပုတို့အဖွဲ့ဝင်တွေရော အပါအ၀င်) ပြောသော စကားဖြစ်ပါကြောင်း …. ” ဟယ်တော့ အဆင်လေးနော် ”
အေးရာအေးကြောင်း = အေးအေးဆေးဆေး
အလန်းလေး = မိသည် မိုက်သည်
အမုန်းဆွဲ = အသားကုန် လုပ်သည်။ စားသ
Re: ခေတ်ပေါ် မြန်မာ အီဒီယမ် စကားလုံးများ
« Reply #1 on: June 21, 2011, 11:54:59 AM »
ရေပေါ်တွင် "ဘော" လော ပေါ်ပြီး.. လေ "လုံ" အောင် စီမံထားသော အရာဖြစ်သည့် အတွက် "ဘောလုံ" ဟု စတင်သမုတ်ခဲ့ရာမှ ကာလကြာလာသည်နှင့် အမျှ "ဘောလုံး" ဟု ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်...
အဆိုပါ ဘောလုံးကို ဓားဖြင့်ပိုင်းပြီး ရရှိလာသော "ကွင်း" များကို "ဘောလုံးကွင်း" ဟု ခေါ်သည်
ဘောလုံကို ရေပေါ်မှာ ပေါ်မပေါ် စမ်းသပ်ခဲ့သည့် "ကန်" ကို ယနေ့တိုင် "ဘောလုံးကန်" ဟု သတ်မှတ် ခေါ်တွင်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ (eng: Ball Lake)
« Reply #2 on: June 21, 2011, 12:09:45 PM »
ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်း = Mercury one way, Iron one way
လက်လွတ်စပယ် = Hand Free Jasmine
ဆရာ မလုပ်နဲ့= Don’t Make the Teacher
ရေချိုးချင်တယ် = I Want to Break the Water
ဒီနေ့နေပွင့်တယ် = Today, the Sun is Open
ကျေးဇူးပြုပြီး မီးဖွင့်ပါ = Please Open the Fire
မီးပိတ်လိုက်တော့ = Close the Fire
ဗိုက်မဆာ ဘူးလား = Stomach Not Hungry?
ရေဝင်ပြေး = Water Enter Run
မနေ့ က နှာခေါင်းပိတ်တယ် = Yesterday, My Nose closed
ကိုယ်ပူနေတယ် = Body is Hot
ဖုန်း အားသွင်းလိုက် = Insert the Force to the Phone
သီချင်း နားထောင် = Song Ear Erect
ဖိနပ် စီးတော့ = Ride Your Shoe
ဈေးကြီး မိလာတယ် = Catch the Big Market
အိမ်ရှင် လာလိမ့်မယ် = House Will Come Alive
လေတက် သွားပြီ = Air Climbed Already
ဈေးတွေ တက်ကုန်ပြီ = Markets are Climbing
ခေါင်းကိုက်သေးလား = Still Bite the Head ?
မဲပေးကြ = Give Black
ဝက်သား စားသလား = Eat the Pig’s Son?
မြစ်တို့ ၏ မာယာ = Trick of the Rivers
မတတ်နိုင်ဘူး ဒါဟာ ကံပဲ = I Can’t Install. This is Lake
စိတ်ပူ လို့ လား = Mind is Hot ?
ချစ် နေသေးလား = Love Sun Small ?
မိုးရွာ တဲ့ နေ့= Rain Village Day
ဖြည်းဖြည်းလုပ် = Slow Slow Make
ဓာတ်လှေကား = Electric Ladder
နှလုံးသား လျှို့ ဝှက်ခန်း = Heart Secret Room
မိန်းမ မယူနဲ့= Don’t Take Woman
ရေခဲ သေတ္တာ = Ice Box
ဒါငါ့အပူ မင်းအပူမဟုတ်ဘူး This is not your hot its my hot
« Reply #3 on: June 30, 2011, 10:09:56 AM »
water follow, Fish follow. = ရေလိုက်၊ ငါးလိုက်. ပေါ့ဗျာ ...
Long Time No See = မတွေ့ရတာ အတော်ကြာပြီနော် ...
No Money By Half = ပိုက်ဆံ နည်းနည်း(တ၀က်)တောင်မှ မရှိဘူး ...
« Reply #4 on: November 11, 2011, 07:46:40 PM »
story no come ,flower no come=ပုံမလာပန်းမလာ
hammer two body tiger=တူနှစ်ကိုယ်ကြား
« Reply #5 on: March 29, 2012, 07:59:56 PM »
နီနီဝင်းရွှေ=red red yellow gold
« Reply #6 on: April 01, 2012, 01:18:03 AM »
သူငယ်ချင်းတယောက်လှမ်းပို့ပေးလိုက်တာပါ။ ဖေ့စဘုတ် က ရတယ်ပြောပါတယ်။
သဘောကျလို့ မဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ အတွက်။
မူမူကလဲ သူငယ်ချင်းများက *အရောက်ပို့ * သောကြောင့် ကျော်ကျော်ကို *
အီစီကလီ * ပြန်၍ *ထု*သည်။
ကျော်ကျော်၏*ဖောရှော *ကောင်းမှုကြောင့် မူမူသည် ကျော်ကျော်ကို * ငြိ
ကျော်ကျော်၏ *ဖွန်ကြောင် * ချက်မှာ* ၉ လောက်ရှိ *
သဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် မူမူ *ကျ * သွားသည်။
ချစ်သူတို့သဘာဝ ကျော်ကျော်က မူမူကို *ဘွတ်စမံ * ကျွေးသည်။
မူမူ မှာ မစားဖူးသောကြောင့် * နားကား*သွားသည်။
လိုတာထက်ပိုကျွေးမိသောကျော်ကျော်လဲ *ဂိ *သွားသည်။
သို့ဖြင့် မူမူမှာ *ကိုဝင်းကြည*် ရရှိလာသောအခါ
လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသော ကျော်ကျော်မှာ * တိုင်ပတ် * တော့သည်။
မိမိကို *ဖောင်း * လာသောကျော်ကျော်ကို မူမူက*တင်း*သွားပြီး သူမ* အမ်း
တစ်ချိန်က *ဖလာကြိတ်* ၍ *ကုန်းဆင်း* ခဲ့သော ကျော်ကျော်မှာမူမူကို
*ရှော် * ချင်သောကြောင့် * အိုင်စီ *လွတ်ပြီး *ဂေါက်
ထိုကိစ္စကို * ဘီးဂျဲ *ကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်သော မူမူ၏ အဖေကြီးကသိသွားသည်။
သမီးဖြစ်သူကို *ဂျင်းထဲ့ *ခံရသဖြင့် အဖေကြီး *ပျားတုပ်*သွားသည်။
မွေးထားသည့် တပည့်များကို * ပြဲ * သည်အထိ တိုက်ပြီးလျှင်ကျော်ကျော်ကို
* ဂန့် *သည်အထိ * ကျွေး *ရန်ညွန်ကြားသည်။
ကျော်ကျော်လဲအဖေကြီးကို * ဂျွတ် * သွားပြီး သူတို့နှင့်ဝေးရာကို *
အဖေကြီး၏ တပည့်များမှာ * ပိန်း * သောကြောင့် ကျော်ကျော်ကို *
သို့သော်အဖေကြီး၏ ရှာဖွေမှုမှာ *ကျွတ်ဆင် *
ကြီးဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင် ကျော်ကျော်* ညောင်း
တပည့်များက ၁ယောက် ၁ ချက် ဝိုင်း *ကြုံး* လျှင်တောင် *ရှော့*
တက်ပြီး * ရှော *သွားနိုင်သဖြင့် ကျော်ကျော်မှာ အဖေကြီးကို
ကျော်ကျော်ကို* ဖု * နေသော်လဲ အဖေကြီးသည် ကလေးမျက်နှာကိုထောက်၍
မျက်နှာအ* ဘူြ*ကီးဖြင့်ကျော်ကျော်ကို အိမ်သို့ပြန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ကံကောင်း၍ ကျော်ကျော်*မျိုးကန်း *မည့် ကိစ္စမှ လွတ်မြောက်သွားပြီး
နောက်ထပ် ထွက်ပြေးမည့်အစီအစဉ်ကို* ဥ *ထားလိုက်တော့သည်။
« Reply #7 on: May 30, 2012, 01:45:55 AM »
အခု တလော လူတွေ ပြောပြောနေတဲ့ "နေပါ ဂဏန်း ရာ" က ဘာ အဓိပါယ်တုန်းဗျ
« Reply #8 on: June 16, 2012, 08:56:03 PM »
Quote from: juniorA on May 30, 2012, 01:45:55 AM
« Reply #9 on: June 16, 2012, 09:54:02 PM »
1.how old are you?=မင်းဘယ်လိုအိုသွားတာလဲ
3.where does you live?မင်းဘယ်မှာlive(show)လုပ်လဲ
5.turn right=အမှန်ကိုလှည့်ပါ..turn lift=လှည့်ပြီးထားခဲ့သည်
6.by the way=လမ်းမကြီးအားဖြင့်
10.how long have you been in singapore?မင်းစင်ကာပူမှာဘယ်လိုရှည်လာတာလဲ
11.get into bed=အိပ်ရာထဲတွင်ရသည်
13.getting out= အပြင်တွင်ရသည်...getting in=အထဲတွင်ရသည်
15.make up your mind=မင်းရဲ့စိတ်ကိုမိတ်ကပ်လိမ်းလိုက်ပါ
16.try on=အပေါ်တွင်ကြိုးစားပါ....put on အပေါ်တွင်ထားပါ
17..keep an eye=မျက်လုံးတလုံးသိမ်းထားပါ
21.go out with date=နေ့စွဲနဲ့အပြင်ထွက်သည်
23.everything will be all right=အားလုံးညာဖက်ဖြစ်သွားမှာပါ
24.i am not feeling well=ငါရေတွင်းကိုခံစားလို့မရတော့ဘူး
28.shut the fuck up=အောက်ကပိတ်ပြီးfuckလုပ်ပါ
Pages: 12» | Go Up